नासाद्वारा फोटो खिचेको ब्ल्याक होल वास्तवमै एक प्लाज्मोइड हो: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
नासाद्वारा फोटो खिचेको ब्ल्याक होल वास्तवमा प्लाज्मा प्लाज्मिड हो
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	3 नोभेम्बर 2019 मा	•4टिप्पणिहरु
मेरो छिट्टै प्रकाशित हुने पुस्तकमा, म ब्रह्माण्डको बारेमा कुरा गर्नेछु जस्तो लाग्छ हामीले सोचेका छौं। अन्य चीजहरू मध्ये, 'ब्ल्याक होल' को घटना छलफल गरिएको छ। नासाले हालसालै ब्ल्याक होलको "फोटो" प्रस्तुत गर्‍यो। तलको भिडियोमा तपाईंलाई वर्णन गरिएको छ कि कसरी यो ब्ल्याक होल सम्भवतः प्लाज्मा प्लाज्मिड हो। यो भिडियो र च्यानलका अन्य भिडियोहरू पनि हेर्न उपयुक्त छ।थन्डरबोल्ट परियोजना"हेर्नका लागि। मा मेरो पुस्तक को बारे मा अधिक यो अघिल्लो एक पोष्ट चाँडै म सटीक वितरण मिति प्रस्तुत गर्नेछु।
मानौं कि केही प्राकृतिक कानूनहरू ब्रह्माण्ड भित्र लागू हुन्छ जति हामीले यसलाई बुझेका थियौं, यो इमान्वेल वेलीकोभस्कीका सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्न उपयोगी छ। वैज्ञानिक डेभिड टालबोट र वाल थोर्निलले थन्डरबोल्ट परियोजनाले वेल्कोस्भ्कीका सिद्धान्तहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ र यस आधारमा ग्रहहरूको उत्पत्ति, संरचना, तापक्रम र ग्रहहरूको वातावरणको बारेमा सही स्पष्टीकरणको साथ आउँदछ। यो किनभने तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि अवलोकन गरिएको ब्रह्माण्ड भित्र केवल गुरुत्वाकर्षण रकम मात्र होइन तर विद्युतीय चार्ज पनि छ। छोटकरीमा, ग्रहहरू विद्युत चार्ज हुन्छन्। यदि तिनीहरू एक अर्काको नजिक आउँदछन्, स्राव प्रायः हुन्छ, जसले प्लाज्मा गठन गर्न सक्दछ।
ब्रह्माण्डको हालको सैद्धांतिक मोडेलमा कालो प्वालहरू ब्रह्माण्ड (जसरी हामीले बुझेका थियौं) पनि विद्युतीय चार्जमा परेको छ भन्ने कुरालाई विचार नगरी आइन्स्टाइनले गुरुत्वाकर्षणको सापेक्षता सिद्धान्तमा आधारित छ। अल्बर्ट आइनस्टाइन मोडेलमा 'ब्ल्याक होल' को अवधारणा निर्माण गरियो। अनौठो कुरा के हो भने कि त्यो सिद्धान्तमा कालो प्वालहरू यति भारी हुन्छ कि तिनीहरूले सबै द्रव्यमान र प्रकाश ग्रहण गर्दछन्। परिभाषा अनुसार प्रकाश यति ब्ल्याक होलबाट फर्केर आउँदैन त्यसैले यसलाई अवलोकन गर्न सकिदैन। विज्ञान, तथापि, दाबी गर्दछ कि उनीहरूले अझै यस्तो ब्ल्याक होल वरिपरि चमक देख्न सक्छन र त्यसैले नासाले एक्सएनयूएमएक्समा ब्ल्याक होल वरपरको चमकको पहिलो फोटो प्रस्तुत गरे।
कालो प्वालको अस्तित्वको सिद्धान्त परिकल्पनाहरूको संचय हो र विज्ञान यसको परिकल्पनाहरू राख्न दृढ झुकाव राख्दछ, किनकि श्रृंखलाको एक भागको रूपमा। त्यो आइन्स्टाइनको सिद्धान्तमा आधारित छ खस्छ, पूरै सिद्धान्त खस्कन थाल्छ।
जहाँसम्म, कालो प्वालहरू अवस्थित छैनन्। वाल थोर्नहिलले यूट्यूबको प्रस्तुतीकरणमा वर्णन गरे जुन नासा द्वारा फोटो खिचेको हुन सक्छ प्लाज्मा प्लाज्मिड सम्भवतः हो। प्लाज्मा प्लाज्मिड बिजुलीबाट चार्ज गरिएका क्षेत्रहरूको बीचमा हुन्छ। प्रयोगशाला परीक्षणहरूले नासालाई ब्ल्याक होलको फोटोको रूपमा देखाए जस्तै उही छवि देखाउँदछ।
स्रोत: विज्ञान न्यूज.org
अक्टूबर 2019 मा नासाले प्रस्तुत गरेको अर्को छवि त्यो फोटोको ग्राफिक कम्प्यूटर सिमुलेशन प्रतिनिधित्व हो र त्यसैले वास्तविक छवि होइन, तर रेखाचित्र हो।
कालो प्वालहरूले सबै चीजलाई आकर्षण गर्ने र बुझ्ने गर्दछ र केहि अनुसार यो अन्य आयामहरूमा पोर्टल हुनेछ। यी धेरै सम्भावित सिद्धान्तहरू हुन्, किनकि प्रश्न यो हो: त्यो सबै कुरा कहाँ जान्छ?
हामी अब जान्दछौं (बाट डबल स्लेट प्रयोग) जुन कुरा केवल धारणा मार्फत परिणत हुन्छ र ब्रह्माण्ड केवल अनुभूतिको परिणामको रूपमा अवस्थित हुन्छ; 'चेतना फार्म स्थिति' बाट धारणा। ब्ल्याक होलको साथ, चीज अचानक देख्न सकिदैन, जुन स्क्रिनमा मृत पिक्सेलसँग तुलना गर्न सकिन्छ। केहि प्राकृतिक नियमहरू सिमुलेशन भित्र लागू हुन्छन्, र ब्रह्माण्डमा विद्युतीय चार्ज आईन्स्टाइनले गणना नगरेको एक कारक हो। पुस्तकको तयारीको क्रममा यसमा पहिल्यै विचार गर्नु उपयोगी छ।
ब्रह्माण्ड एक सम्मिश्रण हो र हिब्रू भाषाले सही ज्यामितिको लागि कोड समावेश गर्दछ
नासाले ब्रह्माण्डलाई कसरी विस्तार गर्न खोज्छ
ट्याग: डेभीड टेलिबोट, बिजुली बाट, विशेष, gat, प्वालहरू, इम्मानुएल Velikovsky, नासा, प्लाज्मोइड, Thunderbolts प्रोजेक्ट, ब्रह्माण्ड, वाल थोर्निल, कालो, कालो
3 नोभेम्बर 2019 मा 17: 58
म आँखाले आँखा चिम्लेन भनेर नासा द्वारा जारी सबै कुरा, यो विगतमा धेरै पटक साबित भयो कि तिनीहरू फोटो र भिडियो सामग्री हेरफेर। र आइन्स्टाइनको सम्बन्धमा टेस्लाले राम्रा वाटलाई राम्ररी बुझे
3 नोभेम्बर 2019 मा 22: 27
वास्तवमै तपाईले जहिले पनि नासा बाट सबै कुरा जाँच गर्नु पर्छ र डबल जाँच गर्नु पर्छ। बिली वाइल्डर र स्टेनली कुब्रिक जस्ता निर्देशकहरू छन् जसले फिल्मको छविहरू र धोकामा सम्पादन गरेर आजसम्म संसारमा झूट बोलेका छन्। तर तपाई यसका बारे केही भन्न सक्नुहुन्न।
4 नोभेम्बर 2019 मा 02: 34
टेस्ला कोइल र तथाकथित हचिन्सन प्रभावले देखाउँदछ कि हाम्रो तत्कालको वातावरण बिजुलीबाट चार्ज भएको छ र यसैले उर्जा क्षेत्रमा छ। शून्य बिन्दु ऊर्जा खेल्न मजाको छ।
17 नोभेम्बर 2019 मा 16: 32
यस्तो देखिन्छ कि विज्ञानले सापेक्षता सिद्धान्तलाई कायम राख्न सबै बिसौनीहरू तान्दै छ, अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहायताले:
« पाथी सिनेमा ग्रोनिंगेनमा जीना र मारिनसको दोहोरो हत्या
युवा संस्थाहरू आक्रामकताको बारे अलार्म बजाउँछन् किनभने 'हेरचाह' वास्तवमा दुरुपयोग हो? »
कुल भ्रमण: 14.046.611